"အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" နှင့် "ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်" | Linux မှ
"အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" နှင့် "ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" အကြားခြားနားချက်များ
လက်တွေ့တွင်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သူတို့၏လိုင်စင်များကိုဝေမျှပေးသော်လည်း la FSF လွတ်လပ်သောအရင်းအမြစ်လှုပ်ရှားမှုသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုထင်မြင်သည်။ ၎င်းတို့သည်မကြာခဏရှုပ်ထွေးပြီး "အခမဲ့" နှင့် "ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" ဟူသောဝေါဟာရများကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။
Open Source Initiative (OSI) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Eric S. Raymond နှင့် Bruce Perens တို့အပါအဝင်လူအုပ်စုသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအရင်းအမြစ်ကုဒ်မျှဝေခြင်း၏လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုထင်ပေါ်စေရန်နှင့်အဓိကဆော့ဖ်ဝဲအိမ်များနှင့်အယူအဆအတွင်းရှိအဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအခြားကုမ္ပဏီများကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သည်။ FSF နှင့် Richard Stallman တို့သည် Free Software ဟူသောဝေါဟာရကို အသုံးပြု၍ ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီပြin္ဌာန်းလိုကြသည်။
အကာအကွယ်ပေးသူများက "open source" ဟူသောဝေါဟာရကိုအင်္ဂလိပ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်တွင် "အခမဲ့ဆော့ဝဲ" (အခမဲ့ဆော့ဝဲ) အကြောင်းပြောသောအခါ FSF အသုံးပြုသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "အခမဲ့" ဟူသောဝေါဟာရ၏မရေရာမှုကိုရှောင်ရှားကြောင်းတွေ့မြင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်၎င်းကိုကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများအားမကြောက်ရွံ့စေဘဲ ပို၍ "နည်းပညာ" နှင့် "ကြားနေ" အမည်ပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်“ လွတ်လပ်” ဟူသောဝေါဟာရကိုစီးပွားရေးလောကရှိလူအများအား“ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိနိုင်” သောကြောင့်၊ များစွာသောအစိုးရများနှင့်လူများကကွန်မြူနစ်ဝါဒနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရေဒါမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဟူသောဝေါဟာရကို Foresight Institute ၏အကြံပေးအဖွဲ့မှ Christine Peterson မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များအတွက်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
developer များအနေဖြင့်ပရိုဂရမ်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအသုံးပြု၊ ပြုပြင်၊ ဖြန့်ဝေ။ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အရည်အသွေးအကျိုးကျေးဇူးကိုလူအများကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ၎င်းတို့အားမူလက Richard Stallman နှင့် FSF မှကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲများတည်ဆောက်ရာတွင်ထိုလွတ်လပ်ခွင့်များရှိခြင်း၏အားသာချက်များကိုအသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာရန် Eric S. Raymond ၏ The Cathedral and Bazaar ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
သို့သော်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုသည် software ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာကဏ္onများကိုအထူးအလေးထားသည်။ နည်းပညာထူးချွန်မှုကိုနှစ်လိုဖွယ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်မြင်သော်လည်းကျင့်ဝတ်စံနှုန်းမှဆင်းသက်လာသည်။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လှုပ်ရှားမှုသည်နည်းပညာဆိုင်ရာထူးချွန်မှုကိုအဓိကရည်မှန်းချက်အဖြစ်ရှုမြင်ပြီးအရင်းအမြစ်ကုဒ်ခွဲဝေမှုသည်ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်သည်။။ ဤအကြောင်းကြောင့် FSF သည် open source လှုပ်ရှားမှုနှင့် open source ဟူသောဝေါဟာရနှစ်ခုလုံးနှင့်ဝေးကွာနေသည်။
OSI သည် OSD (Open Source Definition) နှင့်ကိုက်ညီသောလိုင်စင်ကိုသာအတည်ပြုပြီးသောကြောင့်လူအများစုက၎င်းကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအစီအစဉ်အဖြစ်အနက်ဖွင့်ပြီး "open source" ကို "free software" နှင့်လွတ်လပ်စွာလဲလှယ်ကြသည်။ ထိုဝေါဟာရနှစ်ခုအကြားအရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်းအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုတီထွင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်.
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လှုပ်ရှားမှုသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် Initiative မှတဆင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလှုပ်ရှားမှုနှင့်ခြားနားသည်။ သို့သော်ဒaနရှုထောင့်မှသဟဇာတမဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်လက်တွေ့ကျသောအမြင်နှင့်ညီမျှသည်။ တကယ်တော့ဒီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးဟာစီမံကိန်းများစွာရဲ့လက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြတာပါ။
1 ပျော့၏လိုအပ်ချက်များကို။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်"။
2 FOSS & FLOSS
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်၏အတွေးအခေါ်သည်အဓိကအားဖြင့်ဗဟိုပြုသည်။ ကုဒ်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်ရရှိလာသောပရိုဂရမ်သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားပြီး၎င်းသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်အတွေးအခေါ်နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသဘောတရားများပါ ၀ င်သည်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုဝေမျှ။ မရပါကလူသားများအကြားမျှဝေခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းသည်သာမန်အသိနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလိုပဲ open source သို့မဟုတ် open source သည်ဤလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်ထားသည်, ဤသည်များမှာ:
အခမဲ့ပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖြေ - ဆော့ဗ်ဝဲကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးရမယ် (သို့) ရောင်းရမယ်။
စာရေးသူ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်နံပါတ် (Integrity) - လိုင်စင်များသည်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ လူများသို့မဟုတ်အုပ်စုများတွင် - မည်သူမျှမကျန်ကြွင်းနိုင်ပါ။
အစပျိုးareasရိယာများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိ - စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုသူများကိုဖယ်ထုတ်။ မရပါ။
လိုင်စင်သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိရပါ- အစီအစဉ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုအနေဖြင့်လိုင်စင် ချ၍ မရပါ။
လိုင်စင်သည်အခြား software ကိုကန့်သတ်မထားရဖြေ - လိုင်စင်ကတခြားဆော့ဗ်ဝဲတွေကိုပွင့်လင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ရမယ်။
လိုင်စင်သည်နည်းပညာအရဘက်မလိုက်ရပါ- လိုင်စင်ကို mouse-click လုပ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ software medium အတွက်သော်လည်းကောင်းလက်ခံရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒီ decalogue နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးခုလွတ်လပ်ခွင့်.
open source ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်“ free” ဟူသောဝေါဟာရ၏မရေရာမှုကိုဖယ်ရှားပေးသော်လည်း၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်သည်နှစ်ခု“ free” vs. "အခမဲ့", အသစ်တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါသုံးစွဲသူများအားလွတ်လပ်စွာတိုးတက်စေရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည့် Open Source နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုက်ညီသောပရိုဂရမ်များနှင့်ရင်းမြစ်ကုဒ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရရှိနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်များအကြားထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်ကုဒ်အသုံးပြုမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်သတ်မှုများရှိနေသည်။
လူအများကအရင်းအမြစ်ကုဒ်ပါရှိသည့်မည်သည့် software မဆို open source ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်သူတို့က၎င်းကိုအသုံးချနိုင်သောကြောင့် (ဥပမာဤဆော့ဖ်ဝဲလ်နမူနာသည်လူကြိုက်များသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ package Graphviz ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင်အခမဲ့မဟုတ်သော်လည်း၊ အရင်းအမြစ်ကုဒ်ပါရှိသည်၊ သို့သော် AT&T သည်နောက်ပိုင်းတွင်လိုင်စင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်) ။ သို့သော်ဤဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည်အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏ပြုပြင်မှုများကိုဖြန့်ဝေရန်၊ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏အခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်ထားသည်ကိုသုံးစွဲသူများအားအခွင့်အရေးမပေးပါ။
ဒါစေသည် အသုံးအနှုန်း "ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" ambivalent နေဆဲဖြစ်သည်အကြောင်းမှာအချို့သောအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်မသိဘဲကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲမဟုတ်ဘဲယခင်ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပရိုဂရမ်များ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုရသောအခါသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်အယူအဆကိုအသုံးပြုကြသည်။
အထက်ပါ ambivalence ပေးထားသော လွတ်လပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုပြုပြင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ဖြင့်အနာဂတ်တွင်ဖော်ပြထားသောလွတ်လပ်ခွင့်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောအစီအစဉ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။.
နှစ် ဦး စလုံးအသုံးအနှုန်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သောစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် FOSS (အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် software) ။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းကိုလည်းအသုံးပြုသည် FLOSS (အခမဲ့ / လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့် open source software ကို) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" နှင့် "ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" အကြားခြားနားချက်များ
၎င်းမှာ "open source" ဟူသောဝေါဟာရကိုတီထွင်သူများက "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ http://www.opensource.org/
နောက်ထပ်မှတ်ချက် - တစ်ခုကတစ်ခုကပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့်အပြောင်းအလဲများကိုတင်ရန်နှင့်နောက်တစ်ခု၊ ၎င်းကိုပြုပြင်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းဆုံလမ်းခွကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဒုတိယတစ်ခုကပျော့ပျောင်းတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်"။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အချို့တိအချို့ရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများကိုအမြဲတမ်းလေးစားခြင်းမရှိပါ။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရောင်း။ သင့်အားပြုပြင်ခွင့်မပြုသောကုမ္ပဏီများရှိနိုင်သည်
ဥပမာ? များစွာသောသူတို့သည် BSD လိုင်စင်ဖြင့်ရှိနေပြီးအပြောင်းအလဲများကိုပြန်မပို့ဘဲပိတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့မဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ရောနှောပါက၎င်းတို့သည်အချို့သောကန့်သတ်ချက်များ (Chrome) ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် SL နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများအနက်နောက်ထပ်ဖြစ်သည်။
လူသား၊ ငါမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဘယ်နေရာမဆိုပြန်သွားပါ။ ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါစပိန်လိုတစ်ခုခုရှာနေတယ်၊ ​​ခင်ဗျားဆောင်းပါးကအရမ်းကိုကိုက်ညီတယ်
ဝမ်းသာပါတယ်! ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
Openhatch - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပူးပေါင်းရန်မူရင်းနည်းလမ်း